လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက် | အဘယ်သူသည်ပညာကိုရှာ။ မေးမြန်းချင်သနည်း။ - အပိုင်း 10273
, 1 လူတန်းစားဥပမာအသံအစီအစဉ်စကားလုံးများကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
, 1 လူတန်းစားဥပမာအသံအစီအစဉ်စကားလုံးများကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ကြောငျးမှာမကြာသေးမီကငါ့အစ်ကိုပေးထားသောစကားလုံးအစီအစဉ်: zhik, တင့်ကား။ ငါအစောပိုင်းကကျောင်းတွင်သင်ကြားခဲ့သမျှကိုမှတ်မိနေခဲ့ကြရသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုထိုအခါသတိရ ...
အပေါ် Posted 15.08.2017 29.11.2019
ငါအွန်လိုင်းစာသားပုဒ်ဖြတ်အဘယ်မှာရှိစစျဆေးနိုငျ? ကျနော့်အမြင်ခုနှစ်တွင်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်စစျဆေးဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့် nadzhnaya အစီအစဉ်အကြံပြုအစီအစဉ်များ program နဲ့ Microsoft က Office ကိုနှုတ်မြွက်တော်အွန်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်အမြင်ခုနှစ်တွင်သူတို့အတော်လေးရှိပါတယ် ...
သငျသညျအခမဲ့များအတွက်ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်ကို၏ပိုင်ရှင်၏အမည်ကဘယ်လိုသိရသလဲ ဆဲလ်ဖုန်းနံပါတ်များ၏အဘယ်သူပိုင်ရှင်ထွက်ရှာတွေ့မှအခမဲ့ပြုလုပ်သင်နှင့် probt ဘို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်သည့်ဆယ်လူလာဆက်သွယ်ရေး၏ခရီးသည်အခန်းများတွင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်ဖို့နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည် ...
ပုံစံအရွယ်အစား A1, A2, A3, A4 ကဘာလဲ?
အပေါ် Posted 15.08.2017 30.11.2019
ပုံစံအရွယ်အစား A1, A2, A3, A4 ကဘာလဲ? ဟုတ်ပါတယ်, ဧကန်အမှန်, ဒီနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုပုံစံများကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ထားတဲ့လူတယောက်အရွယ်အစားရှိသည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်ဥပမာ, ရုရှားနှင့်တူရကီနိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မည်။ ...
အဘယျသို့အမည်များကိုကိုးကွယ်ကြသည်မဟုတ်လော ပင်တိုင်းရင်းသားရုရှားအများအပြားအမည်များအကြားနိုင်ငံခြားသားများဖော်ပြခြင်းမ, နိုင်ငံခြားမူရင်းဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ရှိုမဟုတ်သောအရာကိုအမည်များ၏မေးခွန်းကို, လုံလောက်အောင်မကြာခဏလည်းမရှိ။ ဤအတောအတွင်း ...
တစ်နှစ်မိဘများ၏သားနှုတ်ခွန်းထိ? စကားများကလေးပဲနားမလည်ကြဘူး။ IMHO, သို့သော်ဤသည်ဆိတ်သငယ်တောက်ပနှင့်အထင်ကြီးအရှိဆုံးထိထိမိမိဂုဏ်ယူပါတယ်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါအထူးသားသမီးရဲ့ကြိုက်နှစ်သက် ...
အမှတ်တံဆိပ် DEXP အမျိုးအစားကဘာလဲ? reviews? ဒါကြောင့်မဝယ်ရကျိုးနပ်လား?
အမှတ်တံဆိပ် DEXP အမျိုးအစားကဘာလဲ? reviews? ဒါကြောင့်မဝယ်ရကျိုးနပ်လား? ကုန်အမှတ်တံဆိပ် DEXP အတွက် DNS အမှတ်တံဆိပ်အစားထိုး။ အဲဒါကိုသွားကြောင့် DNS ကိုအမှတ်တံဆိပ်၎င်း၏အရည်အသွေးပေါ်အနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအများကြီးလက်ခံရရှိချိန် မှစ. ...
ဘယ်နှစ်ယောက်စင်တီမီတာ။ 1 မှာ DM ခုနှစ်တွင်။
ဘယ်နှစ်ယောက်စင်တီမီတာ။ 1 မှာ DM ခုနှစ်တွင်။ 10sm ။ ငါတဦးတည်း decimeter 40 စင်တီမီတာခုနှစ်တွင် 10simvolov :-) အပေါ်ဆန့်ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး။ ငါဒါတိုင်းတာရန်ကိုအလုံးစုံတို့အဘို့ဤတိုင်းပြည်သတိရကျောင်းကောင်းသောအမှုကိုပြု ...
INN အဖွဲ့အစည်းကိုသိရန်အဘို့အလော ဒါကအဖွဲ့အစည်း INN အမည်, တည်နေရာ, BIN, PPC, မှတ်ပုံတင်, ပြင်ဆင်ချက်များနှင့် uah ၏နေ့စွဲဖြင့်သင်ယူဖို့အခွန် http://egrul.nalog.ru/ များ၏ site ကိုမှရည်ညွှန်းပါတယ်။ ယူကရိန်းတွင်, ပွင့်လင်းလည်းမရှိ ...
အော်ပရေတာ MegaFon ခေါ်ခြင်းဘယ်လိုနေသလဲ?
အော်ပရေတာ MegaFon ခေါ်ခြင်းဘယ်လိုနေသလဲ? သင်တို့သည်ဤမျှရှေးရိုးစွဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် site ကိုအသံချဲ့စက်များမှတက်ချင်ကြဘူးဆိုရငျ, ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါနှင့်မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်) ဖုန်းကိုယူနှင့်ဒေသတွင်းရဲ့စာနယ်ဇင်း 0500 အပေါ်မှီခိုမဟုတျပါဘူး ...
အခမဲ့အွန်လိုင်းဘို့ကို real-time အတွက်ဂြိုဟ်တုမြင်ကွင်းကို။ ငါဘယ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်?
အခမဲ့အွန်လိုင်းဘို့ကို real-time အတွက်ဂြိုဟ်တုမြင်ကွင်းကို။ ငါဘယ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်? သင့်အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကင်မရာမှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည် http://space.utema.ru/earth-online/ အချို့သောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကိုရှိပါတယ် ...
ယခင်စာမျက်နှာ စာမျက်နှာ 1 ... စာမျက်နှာ 10 272 စာမျက်နှာ 10 273
52 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,581 စက္ကန့်ကျော် Generate ။